सुलभलाई हिरासत कालोबजारीको सुत्रपात मन्त्रीलाई बचाऊ किन ? | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
रीता खनालः हिजो शंकर ग्रुपका एक व्यापारी सुलभ अग्रवाल ले बजार मा ५००० मूल्य भएको स्वास्थ्य सामाग्री १५००० मूल्य मा बेच्दै रैछन रे ! कालोबजारी गरेको भन्दै निज लाई प्रहरी ले पक्राउ गर्यो, ठिक गर्यो । तर कुरो को चुरो चै यहिनेर खोल्नै पर्ने कुरो, कालो बजारी व्यापारीलाई कारबाही हुँदा कालोबजारीको सुत्रपात मन्त्रीहरूलाई कार्बाही किन हुदैन प्रधानमन्त्री ज्यु ? न कार्बाही गर्नु हुन्छ न त आफू नै स्वीकार गर्नु हुन्छ ?
नागरिकलाई सम्बोधनका नाम कोरोना महा बिपत्ति सङ जुध्ने कुनै योजना रणनीति र जनतालाई भरोसा र उत्साह भर्ने कुनै शब्द छैन बरु भ्रष्टाचार प्रकरणको ढाकछोपले नै प्रश्रय पायो ? अझै सुनियो मन्त्रीपरिसदको बैठकमा ओम्नि कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द बारे बेखबर हुनुहुन्छ र ? क्याबिनेट कस्ले चलाएको छ ?
उहाँ देखाउन को लागि मात्र हो कि अरु कोही छ ? सफेद झूट नबोल्नुस प्रम ज्यु ? तपाइको जानकारी , निर्देशन बिना कुनै सिन्को भाचिएको छैन यहाँ । शृङ्खलावद्ध भ्रष्टाचारका सबै घटना मा तपाइँ सुरक्षा को कवच बनेको खबरसँग कोहि नेपाली बेखबर छैनन् ।
एउटा ब्यापारी उस्को नियत र ब्यापारको एकमात्र उद्देश्य भनेकै नाफा कमाउने हुन्छ, जति सक्दो बढी कमाउने जसरी पनि कमाउने । असहज परिस्थिति भनेकै उनिहरुको लागि सबै भन्दा उत्तम परिस्थिति हो तर एक राजनितीक ब्यक्ती उस्को एक मात्र उधेस्य समाज सेवा , नागरिक र रास्ट्र को हितमा काम गर्ने । अझै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पदमा आशिन हुदा त सार्बजनिक समारोह नै गरेर सपथ खाने, ब्यक्तिगत फाइदामा फस्ने छैन भन्दै सपथ खाने ।
रास्ट्रमा बिपत्ति परि राखेको बेला अझै त्यो बिपत्तिबाट कोहि अछुतो छैन स्वयं ब्यापारी झन जोखिममा हुन्छ त्यतिबेला पनि काला बजारी गर्नेहरु अपराधी नै हुन यिन्लाइ कार्बाही हुनै पर्छ तर मात्र जनता को हितमा काम गर्ने सपथ र उद्देश्य हुने मन्त्रीहरु आज रास्ट्र यो महाब्याधी कोरोना को कहर ले निशासिएको बेला सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री हरु स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिद प्रक्रियामा पचासै गुणा महङो भएको र उक्त षड्यन्त्र र जालसाजी लाई आफ्नै क्याबिनेट ले स्वीकार गरि ओम्नि कम्पनी सङ को सम्झौता रद्द गरियो ? दुई तिहाई को सरकार निरीह बन्यो ? लोकतान्त्रको उपहास गर्दै स्वस्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिद को जिम्मेवारी नै सेना लाई हस्तान्तरण गर्यो ? आफ्नो लाचारिता को अनुप उदाहरण बन्यो ? नियोजित भ्रष्टाचार को घटना ले सरकार को एकल अधिकार सेनाको पोल्टा सम्म पुग्यो । तर किन एकै प्रकृति को कालो बजारी मा एक व्यापारी पक्राउ पर्दा ओम्नि कम्पनी का ब्यापारी र उक्त प्रकरण का मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरिदैन, कार्बाही को प्रक्रिया अघि बढाइदैनरु बरु प्रधानमन्त्री को सम्बोधन मा संरक्षण को रागरु प्रधानमन्त्री ज्यु कालो बजारी व्यापारी र कालो बजारी तपाइको मन्त्रीहरूमा सजाय को मापदण्डमा विभेद किन ?-खनाल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ हुन्
संक्रमण बढ्दो, तयारी फितलो
काठमाडौं, जेठ १५ । कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै जाँदा परीक्षणका लागि अत्यावश्यक मानिएको पीसीआर